Barnaamijka bakhtiyaa-nasiibka dal ku-galka Mareykanka oo dib loo furay - Bulsho News
Maxay ka wada hadleen Jubbaland iyo Taliyaha AFRICOM ee Soomaaliya?
Dowladda Mareykanka ayaa si rami ah u furtay barnaamijeeda bakhtiyaa-nasiibka ee fursadaha ku noolaasha Mareykanka, inkasta oo ay jirto kumannaan qof oo hore ugu guuleysay oo di u-dhac ku yimid rajadooda nolosha cusub, kuwaas oo u dhashay dalalka Afghanistan, Masar, Peru, Iran iyo waddamo kale.
Maamulka madaxweyne Biden ayaa Arbacadii ku dhawaaqay in diiwaangelinta Barnaamijka Fiisaha Muhaajiriinta ee 2023 – oo caan ku ah bakhtiyaa-nasiibka degganaasha Mareykanka inuu billoowday, waxaana Koongarasku oggolaaday 55,000 oo muhaajiriinta adduunka oo Mareykanka deganaasho rasmi ah laga siiyo, si kor loogu qaado kala-duwanaanshaha Mareykanka.
Halkan ka dhageyso warbixinta oo dhameystiran.
Xayiraadda socdaalka ee Trump, ayaa kumannaan qof oo ku guuleystay bakhtiyaa-nasiibka fiisaha laga hor-istaagay inay yimaadaan Mareykanka.
‘A poem is a powerful tool’: Somali women...
Ecuador to pardon thousands after 118 die in...
Masten Wanjala: Dad garaacid ku dilay ninkii carruurta...
Wararkii ugu dambeeyey xaaladda caafimaad ee madaxweyne Clinton
Canada’s Trudeau may cling to power in election...